Uncedo emva kwentswela-ngqesho: inkxaso-mali onokuyicela | Ezezimali
Ukungasebenzi akuyondlwan 'iyanetha. Ukuba unethamsanqa ngokwaneleyo lokufumana isibonelelo sokungabikho kwemisebenzi inyanga nenyanga, uya kuziva ungcono kancinci ukusukela, ngelixa ufumana umsebenzi omtsha, unayo "umqamelo" wokunciphisa iingxaki. Kodwa ngaba lukhona uncedo emva kogwayimbo? Ukuba sele uza kulugqiba uncedo lwakho, kuyinto eqhelekileyo ukuba uyoyike, ngakumbi ukuba awukafumani msebenzi.
Kodwa kuya kufuneka uyazi loo nto lukhona uncedo emva kokungabikho kwemisebenzi, okoko nje uhlangabezana neemfuno. Ngaba uyafuna ukwazi ukuba zintoni? Namhlanje sichaza iintlobo ezahlukeneyo zoncedo kubantu abangasebenziyo ezikhoyo.
1 Igalelo lokungabikho kwemisebenzi
2 Uncedo emva kokungaphangeli
2.1 Uncedo emva kokungaphangeli: Ingeniso esebenzayo yokufaka
2.2 Uncedo lwabantu abangaphezulu kweminyaka engama-45 ubudala
2.3 Uncedo emva kokungaphangeli kwabantu abangaphezulu kweminyaka engama-52 ubudala
2.4 Isibonelelo sokungaphangeli
2.5 Isibonelelo esingaqhelekanga sokungaqeshwa (SED)
2.6 Olunye uncedo emva kokungabikho kwemisebenzi
Igalelo lokungabikho kwemisebenzi
Isibonelelo sokungabikho kwemisebenzi saziwa ngcono njenge "ntswela-ngqesho", kwaye ngumvuzo ohlawulwa kuwe ekupheleni kwenyanga nangona ungenawo umsebenzi, kuba ngaphambili ubuncedisile ukuwufumana. Ngokukodwa, kuthiwa, kunyaka ngamnye usebenza, uneenyanga ezi-4 zokungaphangeli, ukuze, ngokuxhomekeke kubude bexesha onalo, iya kuhambelana ngaphezulu okanye ngaphantsi.
Olu ncedo lufunyanwa ngokwesiseko sakho, ngaphandle kokongezwa okanye nantoni na eya kuthi inyuse umvuzo wakho xa ubusebenza. Nangona kunjalo, kwaye njengoko besitshilo, ayinasiphelo, kodwa inexesha lokusebenza kwaye, emva koku, ungayeka ukuyihlawulisa, nokuba ufumene okanye awufumananga msebenzi.
Ingxaki kukuba abantu abaninzi abaqokelela intswela-ngqesho abayigqibi kwaye sele benomsebenzi (okanye bayayimisa kuba beyifumene); Ngesi sizathu, nje ukuba esi sibonelelo siphele, baziva bengenakuzinceda kuba, bangaziphilisa njani ukuba akukho mvuzo?
Ngethamsanqa kukho ezinye izinto zoncedo emva kwentswela-ngqesho, mhlawumbi ezingaziwa kangako, Kodwa banokukunceda ukunciphisa le ngxaki ngelixa uqhubeka uzama ukusebenza kwimarike yomsebenzi kwakhona.
Izibonelelo zasemva kokungaphangeli zizixhobo onokuzisebenzisa xa, xa isibonelelo sokungaphangeli siphelile, awukafumani msebenzi wokufumana umvuzo ekupheleni kwenyanga.
Nangona kunjalo, iNkonzo yeNgqesho kaRhulumente, i-SEPE, ibonelela ngothotho loncedo xa ukungabikho kwemisebenzi kuphelile. Kwaye oku kulandelayo:
Uncedo emva kokungaphangeli: Ingeniso esebenzayo yokufaka
Eyaziwa ngcono ngegama laso, RAI, yenye yezibonelelo onokuzicela ukuba nje uhlangabezana neemfuno. Ukuqalisa, Kufuneka ube ungaphantsi kweminyaka engama-65 ubudala. Ukongeza, kuya kufuneka ubhalise njengomntu ofuna umsebenzi kwi-SEPE, oko kuthetha ukuba banokukubiza ukuba wenze udliwanondlebe lomsebenzi okanye ukuya kwiikhosi zoqeqesho.
Kwaye ngekhe ube nengeniso yenyanga ephezulu kune-75% yomvuzo omncinci wokusebenza.
Unomlingane kunye / okanye abantwana abangaphantsi kweminyaka engama-26 ubudala (okanye abantu abakhubazekileyo abakhubazekileyo), abantwana abakhuliswa ngabazali ... ke yonke ingeniso yeyunithi yosapho mayongezwe kwaye ke, ingadluli kuma-75% eSMI.
Olu ncedo luyakwaliwa ukuba ngaba uye waxhamla kulo ngaphambili (Oko kukuthi, unyaka ongaphambili), ngaphandle kokuba ulixhoba lobundlobongela obuphathelele kwezesini okanye umntu okhubazekileyo.
Isixa solu ncedo yi-430,27 euro kwaye ifunyenwe ubuninzi beenyanga ezili-11. Ngaphandle kwelo xesha kuya kuba yimfuneko ukukhangela ezinye iindlela.
Uncedo lwabantu abangaphezulu kweminyaka engama-45 ubudala
Xa umntu efikelela kwiminyaka engama-45 ubudala kwaye engaphangeli, ukubuyela kwimarike yezabasebenzi kunzima kakhulu kunabantu abatsha. Ke ngoko, kukho olu ncedo.
Yinkxaso-mali ukuze ukwazi ukuqokelela inkxaso-mali. Kodwa ngenxa yoku, uthotho lweemfuno kufuneka kufezekiswe, ezinje nge ubhalise njengomntu ofuna umsebenzi kangangenyanga enye emva kokugqiba inzuzo yakho, ukungalahli isithembiso somsebenzi kwaye ungakhange uvume ukwenza naluphi na uqeqesho.
Ingeniso akufuneki idlule kwi-712.50 euro.
Ukuba uhlangabezana neemfuno, uya kuba nakho ukufikelela kolu ncedo. Ewe kunjalo, uya kuhlawulisa i-430 euro ngenyanga kwaye kuphela ixesha elininzi leenyanga ezi-6.
Uncedo emva kokungaphangeli kwabantu abangaphezulu kweminyaka engama-52 ubudala
Olu ncedo lwalusele lukhona kuncedo lwasemva koqhankqalazo kangangexesha elithile, kodwa lwanikwa abo bangaphezulu kweminyaka engama-55 ubudala. Nangona kunjalo, kwiminyaka embalwa eyadlulayo yathotyelwa kwiminyaka engama-52. Ngokumalunga neemfuno, ukongeza kubudala, kubalulekile ukuhlangabezana ngokufanayo nokuba ubunokufikelela kumhlala-phantsi othatha inxaxheba. Yintoni egqithisile, Kuya kufuneka ungaphangeli kwaye ubhalise kwi-SEPE, ungabinayo ingeniso yakho kwaye usebenzise ezinye izibonelelo.
Ngokumalunga nemali, i-80% yoncedo ifunyenwe kwi-Public Indicator ye-Monthly Multiple Effects Income (IPREM) kwaye iyakugcinwa de ufumane umsebenzi okanye de ungene kumhlala-phantsi. ubudala).
Kule meko, isibonelelo sokungaphangeli sinokucelwa kuphela xa kukho abantu abaxhomekeke kusapho, kwaye nesibonelelo sokungaphangeli siphelile. Ukwenza oku, ukongeza ekubhalisweni njengomntu ofuna umsebenzi, ngekhe wale nayiphi na into oyinikezelwayo okanye ikhosi yoqeqesho. Ingeniso yosapho ayinakugqitha kwi-75% yomvuzo ophantsi kwaye kubalulekile, kwaye ngenxa yesi sizathu siyigxininisa, inyani yokuba isibonelelo esinegalelo kufuneka ukuba siphelile.
Njengomgaqo jikelele Uncedo luqokelelwa iinyanga ezili-18, kodwa ngokwe-6 ngo-6, Ngaphandle kokuba bengaphangeli phantsi kweminyaka engama-45 ubudala kunye nabantu abaxhomekeke kusapho abagqibe (banegalelo) ukungabikho kwemisebenzi ubuncinci beenyanga ezi-6. Kule meko, ixesha liinyanga ezingama-24.
Ixesha elifanayo ngokungathi abaphangeli ngaphezulu kweminyaka engama-45 ubudala benesibonelelo sokudinwa esidibeneyo seenyanga ezi-4 kunye noxanduva losapho.
Kwimeko yabangaphangeliyo banoxanduva losapho nangaphezulu kwe-45, kodwa ngubani oza kugqiba isibonelelo sokungabikho kwemisebenzi ubuncinci iinyanga ezi-6, kuyakubakho iinyanga ezingama-30 zalesi sibonelelo sokungasebenzi.
Uya kufumana i-euro ezingama-451.92 ngenyanga.
Isibonelelo esingaqhelekanga sokungaqeshwa (SED)
Olu ncedo lwee-euro ezingama-431 ngenyanga, kangangexesha leenyanga ezi-6, zinikezelwa kubantu abangaphangeliyo ixesha elide. Ukuze ukwazi ukuyicela, kufanele ukuba sele uyigqibile inzuzo yokungaqeshwa, kwaye uthathelwe ingqalelo njengexesha elide ungaphangeli (Oko kukuthi, ngaphezulu kweentsuku ezingama-360 zibhalisiwe njengomntu ofuna umsebenzi kwiinyanga ezili-18 ngaphambi kokuba ufake isicelo senzuzo) .
Solo inikwa abantu abaxhomekeke kuye kwaye kunyanzelekile ukuba kungabikho mivuzo, okanye ubuncinci ukuba ingabikho ngaphezulu kwe-75% ye-SMI.
Olunye uncedo emva kokungabikho kwemisebenzi
Ukongeza kwezi zibonelelo sele sizikhankanyile, inyani kukuba kukho nezinye izinto zoncedo emva kwentswela-ngqesho, ezingaziwayo, kodwa ezisebenza ngokukuko.
Inkxaso-mali yegalelo elingonelanga.
Uncedo lwabasebenzi basekhaya.
Inkxaso yabasebenzi bethutyana
Abaphambukeli ababuyileyo abangaphezulu kweminyaka engama-45 ubudala.
Uncedo oluvela kumabhunga edolophu nakwiindawo ezizimeleyo.
Uncedo oluvela kwii-NGOs (eCáritas, Red Cross ...).
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Uqoqosho ngokubanzi » Ngqesho » Uncedo emva kokungaphangeli
I-inshurensi yemoto kunye okanye ngaphandle kokugqitha